I-10 yeyona midlalo yeqhinga lokwenene yexesha lokwenyani ye-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-10 yeyona midlalo yeqhinga lokwenyani yexesha lokwenyani ye-Android kunye ne-iOS
I-10 yeyona midlalo yeqhinga lokwenyani yexesha lokwenyani ye-Android kunye ne-iOS
Imidlalo yeqhinga igubungela ukubanzi okubanzi njengomnyama. Inxalenye ebalulekileyo yeli bala libonisa izicwangciso zexesha lokwenyani kwaye kweli nqaku, siza kujonga ezinye zezona zibalaseleyo phakathi kwabo.
Siqokelele iqela lemidlalo enomdla yeselfowuni yakho, ke ncamathela kude kube sekupheleni, ukuze ukhethe ozithandayo!
Ngoku, masifike kuyo ngesihloko sethu sokuqala seqela!
Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple Ixabiso:$ 0.99
ICartoon Craft yile nto ungayithathiyo xa udibanisa iBlizzard kunye neapos ye-WarCraft 2 kunye nesimbo sokuzoba Oopopayi beCarbot . Umxholo weklasikhi we-Orcs vs yaBantu ukhutshiwe kunye nokongezwa kweZombi ukuze wonwabe ngakumbi. Ngokwendalo, umdlalo awukho & apos; ungazithathi nzulu kakhulu kwaye unexabiso elifanelekileyo lokuhlekisa elijikelezwe macala onke. Ngokubhekisele kumdlalo weqonga, yiyo kanye le nto uyilindeleyo: yenza iiyunithi, uqokelele izixhobo, wakhe isiseko sakho, wenze iiyunithi ezininzi, ubulale iintshaba zakho. Ngokuqinisekileyo, kubiza i-1 yedola kodwa iCartoon Craft inyanzelekile ukuba ikuzisele ngaphezulu kweedola kunye neapos efanelekileyo ekuzonwabiseni.
Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple
Njengoko igama libonisa, isenzo esibonakalayo senzeka kwenye iplanethi. Imizobo yomdlalo iphosa kwi-StarCraft yoqobo kwaye kunjalo ke ukuziva ngokupheleleyo komdlalo. Musa ukulindela inqanaba elifanayo lobunzulu kunye nokwahluka, nangona kunjalo.
Kukho amaqela amathathu ahlukeneyo onokukhetha kuwo, kodwa kulo mdlalo, bonke bangabantu kwaye ke bajongeka behle ngendlela efanayo. Akuyena umdlalo othakazelisayo okanye okhawulezayo, kodwa ukuba ufuna into yendabuko, i-Expanse iya kubetha iintambo ezifanelekileyo ze-nostalgia, ngokuqinisekileyo!
Umntla ombi: uHlelo lweJotunn
Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple Ixabiso:$ 4.99 ngexabiso
Umntla ombi ngumdlalo olula kwingqondo kodwa unokukuhenda ngokulula ngokubonakalayo okupholileyo kunye nomdlalo wokuzonwabisa. Umsebenzi wakho kukukhusela isiqithi sakho esincinci ekuhlaseleni i-vikings, usebenzisa ubume kunye neempawu zomhlaba wommandla wokucwangcisa iiyunithi zakho ngeyona ndlela isebenzayo. Iziqithi zenziwe ngokwenkqubo, oko kuthetha ukuba kukho inani elingenamda kuzo njengoko umdlalo ukudalela enye ngaphakathi kweeparameter ezimiselweyo kwangaphambili. Oko kukhulisa umdlalo kunye neepos; ukuphindaphinda kwakhona kakhulu. Ulawulo lunomdla kwaye kulula ukufumana ukuxhoma, ke uya kukwazi ukudlala ngokungakhathali iiyure.
Misela kwaye woyise: Iimbangi
Ukuyalela kunye nokuphumelela yenye yezona ndlela zithandwayo zexesha lokwenyani kwilizwe liphela kwaye iiRivals yinto eyahlukileyo eyahlukileyo kumdlalo oqhelekileyo obhekiswa ngqo kwiselfowuni engqondweni. Isusa itoni yezinto njengokuhlola imephu kunye nokwandisa iziseko, kugxilwe kuphela kumadabi.
Ubekwe kwindawo encinci, apho ulwa nomnye umdlali ngaphezulu kolawulo lwamanqaku amathathu aphambili. Ukuba iiyunithi zakho zilawula ubuncinci kuzo zimbini, isiseko seqela elichasayo kungekudala aliyi kuba yinto ngaphandle kwenkunkuma. Iiyunithi zeMicromanaging kunye nokukhetha umgca olungileyo ngexesha elifanelekileyo yeyona nto ibaluleke kakhulu kwiiRivals. Imijikelo iyakhawuleza kwaye ihamba ngokukhawuleza, ilungele ukugcwalisa imizuzu embalwa yexesha lokuphumla.
Iimfazwe zamakhowa 2
Okokugqibela, umdlalo ongabandakanyi iitanki kunye nobunye oomatshini abanzima. Iimfazwe zamakhowa ama-2 konke malunga nesicwangciso sakho semacro endaweni yokulawula iiyunithi ezizodwa. Yalathisa imikhosi yakho yamagorha amakhowa ukuthatha kancinci imephu kwaye uloyiso lolwakho. Oko kulula ukutsho kunokuba kwenziwe, nangona kunjalo. Umchasi wakho usenokuba yinyoka eyoyikisayo kwaye uzama ukwenza intshukumo yeqhinga ongasokuze ulibone liza. Ngokwenyani, uyakuyibona isiza kodwa isenokuba semva kwexesha ukuyiphikisa.
Iimfazwe zeMushroom 2 zinoyilo olupholileyo nolwahlukileyo kunye nomdlalo wokudlala omnandi oya kuthi ubambeke kuwo iiyure.
IRoma Imfazwe Iyonke: Uhlaselo lweBarbarian
Asinakuthetha malunga nemidlalo yexesha-lokwenyani ngaphandle kokukhankanya isihloko esivela kwelinye lawona ma-franchise aziwa kakhulu: Imfazwe iyonke. Isiseko seRoma xa iyonke iMfazwe: Uhlaselo lweBarbarian lulula kakhulu: ii-barbarians ziyahlasela. Njengoko beqhele ukwenza. Unokukhetha elinye lamaqela ali-18 kwaye uzame ukuphanga iRoma okanye ukunqande ukuba kungenzeki. Njengayo yonke imidlalo yemfazwe iyonke, uhlaselo lwangaphandle kunye nemidlalo yokuhambisa imikhosi ejikeleze isimbo esisekwe kwimephu kwaye emva koko ungene kwindima yomlawuli wamajoni xa iiyunithi zakho zihlangana nomkhosi wotshaba. Ezo & apos; xa kufika ixesha lesicwangciso-qhinga sokwenyani. Kwaye kwimfazwe iyonke, wena & apos; kuya kufuneka ubukhali kwaye ukhawuleze xa uhambisa iiyunithi zakho kwindawo ekulweni okanye ungasokola kabuhlungu.
Ngokuqinisekileyo, olu hlobo lomdlalo alunakulungeleka kwiscreen se-smartphone kodwa abaphuhlisi benze konke okusemandleni abo ukwenza ulawulo lube lolungileyo kangangoko. Ukuba ufumene ixesha elininzi lokubulala kunye nefowuni yakho yokwenza nayo, utyalomali lwe- $ 5 luya kuba ngaphezulu kwexabiso.
Buyela kwizinto ze-sci-fi, kodwa kwi-Galaxy Reavers, isenzo senzeka endaweni ngokwayo. Umdlalo ukhumbuza i-MMO Eve ethandwayo kwi-Intanethi kodwa ilula kakhulu kwaye kugxilwe kakhulu kwiimfazwe ezinomdla phakathi kweenqanawa ezibonakala zipholile. Ungahlanganisa iqela leenqanawa kulo naliphi na kwiiklasi ezisi-8 ezahlukeneyo, nganye inamandla kunye nobuthathaka bayo. Ngezixhobo ezoneleyo, emva koko unokuhlaziya ubugcisa ngalunye ngezixhobo eziya kulungela isitayile sakho sokudlala. Emva koko, lixesha lokuqala ukoyisa iinkqubo zeenkwenkwezi!
Isikali se-epic yeGalaxy Reavers kunye nokubonwayo kuyenza ibe sesinye sezona zithuba zibalaseleyo zexesha lokwenyani leselfowuni ngoku.
Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwiVenkile yeApple yeApple Ixabiso:$ 13.99 ngexabiso
Njengoko unokuxela kwixabiso, iNkampani yamagorha ikwelinye inqanaba ngokuthelekiswa neminye imidlalo emininzi kolu luhlu. I-RTS esekwe kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi apho ufumana ukulawula iiyunithi ezahlukileyo, ukusuka kuluntu olusana ukuya kwiitanki, kumanqanaba entsonkothileyo kwaye ayilwe kakuhle. Umgangatho wemizobo ufana nePC njengoko unokufikelela kwiselfowuni kwaye bunjalo nobunzulu bomdlalo. Kwaye ngelixa ixabiso lixabiso, ubuncinci awuzukufumanaxhala malunga neentengiso kunye nokuphucula ixesha elitshixwayo okanye ukuthengwa komdlalo. Ukuba wena & ampos; uyonwabele imidlalo yeWWII kwiPC yakho kwaye ufuna ukuhamba ngefowuni, iNkampani yamagorha intle kakhulu njengoko ifika.
Khuphela kwiVenkile yeGoogle Play Khuphela kwi-Apple TestFlight
Yirhangqele phezulu! lulongezo olutsha kraca kwihlabathi lokudlala iRTS. Ngapha koko, ukuyidlala kwi-iPhone, kuya kufuneka uyikhuphele kwi-Apple & apos; s Inkqubo yoVavanyo lwesoftware yokufikelela kwangoko. Umdlalo wokudlala ngokuthe ngqo ngokwaneleyo: uhlasela iinqaba zotshaba okanye uzikhusele. Uyasandisa isiseko sakho ngezakhiwo eziyimfuneko kwaye uqeqeshe iiyunithi oya kuthi & apos; uya kuthi ufeze umsebenzi okhoyo. Imizobo ibhlokile kodwa ngendlela entle, uyilo ngokubanzi luyonwabisa ngokwaneleyo. Umdlalo ukwabandakanya umhleli wenqanaba ekuvumela ukuba wenze iimephu zakho kwaye uvavanye uhlaselo lwakho okanye iindlela zokuzikhusela kwinani leemeko ezintsha.
Ubugcisa beMfazwe 3
Kwaye okokugqibela, sinobugcisa beMfazwe 3. Oku yeyona nto iphambili kwaye iyilelwe ixesha lesicwangciso somdlalo we-smartphones. Izinto ezibonakalayo ngokucacileyo azenzelwanga ukuba ziyinyani, kodwa ziyamkholisa amehlo nangona kunjalo kwaye iziphumo zikwinqanaba. Ufumana iintlobo ezahlukeneyo zezakhiwo kunye neeyunithi kwaye ulawula zonke iinkalo zomdlalo wakho wokudlala ngendlela obuya kwenza ngayo kumdlalo weRTS owenzelwe iPC. I-interface inomdla kwaye kulula ukuyisebenzisa: akukho mifanekiso mincinci ekunzima ukuyicinezela kwisiphithiphithi sedabi.
Ukuphuma ebaleni lomlo, zininzi izigqibo ekufuneka uzenzile ngokunjalo. Ukusuka kwinqanaba lephulo lakho ukuya kuphuculo olunokuzenza kwiiyunithi zakho, konke kusezandleni zakho.
I-Art of War 3 inikezela ngamava esicwangciso-qhinga sokwenene sexesha-lokwenene kwaye kuyintsikelelo ukuba umdlalo ukhululekile ukudlala.
susa iibakaki kuluhlu python
isamsung note 9 ngolwesihlanu omnyama 2018
Ungayiseta njani ukondla iindaba ze-Facebook kwezona zithuba zangoku kunye nokuthintela izimvo
Nazi iimeko zeGalaxy Note 4 ezisemthethweni
Ezi oldie kodwa goodie Kindle Paperwhite e-readers azinangqondo zitshiphu namhlanje kuphela
Nantsi indlela onokufumana ngayo i-iPhone 8 64GB yasimahla xa uthenga i-iPhone X kwi-AT & T.
Imidlalo ekumgangatho we-10 efana nokuNgqubana kwamaKhaya kuyo yonke into eniyakhayo emhlabeni, imikhosi eyalela abathanda abantu abaninzi!
Ukunyanzela ukuqala kwakhona kwakho i-Samsung Galaxy S9 okanye i-S9 +